Kiobà: Noafahana Ry Yoani Sánchez Rehefa Notazonina 30 Ora · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2012 22:54 GMT
Noafahana ny zoma 5 oktobra tamin'ny sivy orana alina ora EST rehetra notazonin'ny polisy tao Havana, Kiobà vonijmaika, taorian'ny nitazonana azy tany amin'ny tanàna iray any atsinanana antsoina hoe Bayamo ny omalin'io ny bilaogera kiobàna fanta-daza Yoani Sánchez sy ny bilaogera isany Agustín Díaz sy Reinaldo Escobar (vadin'i Sánchez). Taoriana kelin'izany, nisioka i Sánchez,
@YoaniSanchez: #Cuba Vao navotsotra izahay!! notazonina 30 ora ary maro zavatra tian-ko zaraina 🙁
Nizotra nankany Bayamo ry Sánchez sy ireo mpitovy asa aminy nanatena hanatri-maso sy hitatitra ny fitsarana an'i Angel Carromero, teratany Espaniola voampanga ho namono olona tsinahy tamin'ny lozam-pifamoivoizana nahafaty ilay mpiaro ny demokrasia malaza Oswaldo Payá sy ilay mpikatroka Harold Cepero. Nizotra ho any Kiobà i Carromero tamin'ny volana jolay hihaona amin'ny mpandala ny zon'olombelona ao amin'ny nosy. Nisioka i Sánchez fa ny fikasany dia ny hanangom-baovao tamin'ilay fotoam-pitsarana.
@YoaniSanchez: #Cuba Fanaovan-gazety madiorano ny fikasako. Hanatrika ny fitsarana an'i @angelcarromero sy hitati-baovao avy any #Bayamo mampiasa ny kaonty #Twitter -ko.
Taorian'ny nanafahana azy dia niezaka ny hanara-baovao momba ny fitsarana an'i Carromero an-tserasera i Sánchez. Nosiahany fa “tsy misy dikany” raha oharina tamin'izay nanjo ny fianakaviana Payá ny momba ny fisamborana azy.
@YoaniSanchez: #Cuba Ny vaovao mampalahelo sady manan-danja indrindra dia lasana ny fianakaviana @oswaldopaya. Maivana dia maivana ny fisamborana anay raha oharina tamin'ny nahalasanan-dry zareo.